Amazinyo Ezimonyo eKapa | Udokotela Wamazinyo Wezimonyo eKapa
umkhakha wamazinyo we-Cosmetic osezingeni lomhlaba
Faka Amazinyo Alahlekile
Vuselela Ukumamatheka Kwakho
Buyisela Ukuzethemba Kwakho
awudingi ukuhamba umhlaba ukuze uzwe amazinyo asezingeni lomhlaba.
I-OptiSmile ikulungele ngokukhethekile ukubhekelela izidingo zakho ngazinye. Odokotela bethu bamazinyo abanobungane nabahlanza ngomlomo baqeqeshwe ngokukhethekile ukusiza iziguli ezinezinkinga ezahlukahlukene zamazinyo, futhi zizohlela izinhlelo zokwelashwa ezikufanelayo.
Bhuka Ukubonisana Kwamahhala Kwevidiyo Yakho
Ngabasebenzi abaqeqeshwe ngokukhethekile, siyakwazi ukunikeza izinketho eziningi zokwelashwa ezifanele impilo yakho, isabelomali kanye nezingqinamba zesikhathi. Eziningi zezindlela zethu zokwelashwa zingenziwa ngokuvakasha okukodwa, futhi sibe nezikhathi zokululama ezifushane, ngakho-ke ukwelashwa kwakho kwamazinyo kungenziwa ngokushesha nangempumelelo. Sihlala phambili ngentuthuko kwezobuchwepheshe embonini, ukukunikeza izindlela zokwelashwa ezingcono kakhulu ezikhona emakethe. Umkhuba wethu wobuchwepheshe obuphakeme ukwazile ukwenza izinqubo ngokushesha nangempumelelo, ngenkathi sigcina amazinga aphezulu wenkonzo nokunakekelwa kweziguli.
Abasebenzi bethu bathathwa ngesandla, bakunikeza ukukhetha okuhle kochwepheshe abanolwazi ukukusiza ukwenza ukumamatheka okuhle, futhi ilungu ngalinye leqembu lethu lihlanganyela amanani ethu; ukubeka isiguli phambili nokunikeza ukwelashwa okuhle kakhulu. Ukuvakasha kwakho kwamazinyo kufanele kube yinto enhle, futhi sihlose ukusebenzisana njengeqembu ukukunikeza amazinga aphezulu kakhulu odokotela bamazinyo ngemiphumela emihle kakhulu.
amazinyo asezingeni lomhlaba, endaweni yangakini 🙂
Izizathu Ezinhle Ezi-6 Zokukhetha i-OptiSmile
Ingcebo yochwepheshe bamazinyo abanolwazi ezweni lonke nakwamanye amazwe iyatholakala e-OptiSmile.
Ukhathele ukugcwaliswa kwakho ukuwa? Sikwenza kahle okokuqala ngemiphumela ehlala njalo. Isevisi i-100% iqinisekisiwe.
Imali ejwayelekile neyesiko
Azikho izimanga ezifihliwe kwa-OptiSmile, sibheka phambili izindleko zethu futhi sinezinhlelo zokukhokha.
Kwa-OptiSmile, sizibophezele ekusebenzeni nalokho okukhona ngaphambi kokulimaza noma yiziphi izakhiwo ezikhona.
Sinendawo yokupaka eningi futhi sisemizileni emikhulu yezokuthutha eThe Point Mall, eSea Point.
Zonke izinqubo zethu zisebenzisa ubuchwepheshe bamazinyo obuphezulu e-OptiSmile Advanced Dentistry & Implant Center.
Amazinyo Omhlaba Asezingeni Lomhlaba eSea Point!
Iziguli zethu zijabule kakhulu ngomsebenzi wethu, eziningi zazo zithumela abangane nomndeni kulokho esikwenzayo. Sikwazile ukukhula ngomlomo, okukhuluma kakhulu kufinyelela ezingeni lenkonzo nokwaneliseka kweziguli esikunikezayo.
E-Optismile eSea Point, siqhutshwa ukuba sithuthukise ukubukeka, ukunethezeka nokusebenza kwamazinyo nezinsini zakho. Noma ngabe udinga ukufakwa kwamazinyo okugcwalisa, okugcoba noma okwakha kabusha, noma nje ukuthinta umlingo womuntu ohlanza ngomlomo - Ithimba lethu lochwepheshe lisebenzisa ubuchwepheshe besimanje endaweni yobungcweti, enethezekile futhi enobungani ukusiza ukumamatheka kwakho kuphile.
Ngokuthinta okunomusa nokunakekelayo.
Kwa-OptiSmile high tech, odokotela bezimonyo eKapa, ​​sikholelwa ekulondolozeni amazinyo akho nasekuwakhuliseni ukuze akhiphe ukumamatheka okuqinile, okuqondile, okumhlophe nokuzethemba okukhulu.
Siyazethemba emsebenzini wethu ukuthi sinikeza isiqinisekiso senkonzo yeminyaka emi-5 ekufakweni nasekuvuseleleni ngobumba. Okudingeka ukwenze ukulandela imiyalo yokunakekelwa ngemuva kokuya ekuhlolweni kwakho okuhleliwe, kabili ngonyaka nokuhlanzwa e-OptiSmile.
Amazinyo Omhlaba Omhlaba
UDkt Clifford Yudelman neThimba
Xhumana Nathi Namuhla Ngokuqokwa?